एमाले–माओवादी गठबन्धन : लोकतन्त्र र संविधानमाथिको खतरा - Naya Patrika
एमाले–माओवादी गठबन्धन : लोकतन्त्र र संविधानमाथिको खतरा
रेवतीप्रसाद भुसाल | असोज २०, २०७४
एमाले, माओवादी केन्द्र तथा नाम मात्रको नयाँ शक्ति पार्टीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि चुनावी तालमेलको घोषणा गरेका छन् । लोकतन्त्रमा पार्टीहरूले आ–आफ्नो राजनीतिक हैसियत तथा स्थितिअनुसार चुनावी तालमेल गर्नु कुनै अनौठो होइन । विभिन्न देशमा विशेषगरी छिमेकी देश भारतमा यस्ता चुनावी तालमेल वा दीर्घकालीन गठबन्धन बन्ने गरेका छन् । यसै पनि तीनवटा कम्युनिस्ट पार्टी आपसमा मिल्नु त्यति आश्चर्यजनक र अप्राकृतिक होइन । तर, जुन ढंगले र जुन उद्घोषका साथ पछिल्लो तालमेल गरिएको छ, त्यसले अनेकौँ प्रश्न उठाएको छ र ती प्रश्नको उत्तर तीनवटै पार्टीका दलका शीर्ष नेताले आफ्नै कार्यकर्ता र आमनेपाली जनतालाई दिनुपर्नेछ ।
अस्थिरताका पर्याय प्रचण्ड
०७४ जेठमा व्यवस्थापिका संसद्को रोस्ट्रमबाट कांग्रेस, माओवादी गठबन्धनका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सम्झौताअनुसार राजीनामा दिँदा भनेका थिए– नेपाली राजनीतिमा देखिने इमानदारीअभावको इतिहास बदल्दै राजनीतिक इमानदारीको इतिहास निर्माण गर्न मैले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिई नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने बाटो खोलेको हुँ । सबैले महसुस गरेकै कुरा हो कि प्रचण्ड अत्यन्तै चञ्चल र अस्थिर मन भएका व्यक्तित्व हुन् । अठार हजार नेपालीको ज्यान जाने १० वर्षे माओवादी आतंककारी हिंसाकालमा होस् वा त्यसपछिको १२ वर्ष लामो शान्तिपूर्ण संक्रमणकालमा होस्, क्षणक्षणमा बोलिने र बदलिने वचन र गरिएका कर्मले उनको अस्थिर व्यक्तित्वलाई दर्साउँदै आएकै हो । तर, व्यवस्थापिका संसद्मा बोलिएका कुराले आमनेपालीलाई लागेको थियो कि प्रचण्डमा प्रौढता आएछ । तर, उनले संसद्मा बोलेको चार महिना पनि बित्न नपाउँदै त्यस दिन बोलेको कुरा आगामी दिनमा हुने झन् ठूलो अनैतिकताको तयारी थियो भन्ने १७ असोजमा प्रमाणित भएको छ । राजनीतिमा गठबन्धन बन्छन्, बदलिन्छन् यो कुनै आश्चर्यको विषय नै होइन । तर, गठबन्धन बन्दा वा तोडिँदा पनि त्यो गठबन्धनको सामान्य मर्यादा वा नैतिकता भने कायम हुनैपर्छ । प्रचण्ड वा उनले नेतृत्व गरेको पार्टी अहिले कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धनमा छ र अद्यापि सरकारमै छ । सरकारमा रहेको पार्टी सरकारको प्रमुख विपक्षी दलसँग आफू सरकारमा रहँदै तालमेल गर्नु कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता र साधारण नैतिकताभित्र पर्दैन ? हुन सक्छ साध्य वा सत्तालाई मात्र देख्ने साधनको पवित्रतामा विश्वास नै नगर्ने अधिनायकवादी साम्यवादी सोचमा यो कुरा उचित नै होला । तर, वर्तमान संविधानले अंगीकार गरेको लोकतान्त्रिक संस्कृति र प्रजातान्त्रिक आदर्श व्यवहारले यसलाई अवश्य पनि तिरस्कार गर्छ । धेरै टाढा जानुपर्दैन, केही समय पहिले छिमेकी बिहार राज्यमा नितीशकुमारले गठबन्धन तोड्दा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घटना ताजै छ । तर, लोकतान्त्रिक संस्कृति र नैतिकतासँग टाढाको साइनो पनि नभएका व्यक्तिले त्यस्ता घटना र उदाहरणको कसरी हेक्का राख्न सक्छन् र !
०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनको दुई चरणमा धेरै ठाउँमा र तेस्रो चरणमा २—३ स्थानीय तहमा कांग्रेस माओवादीबीच गठबन्धन भएको थियो । त्यतिवेला प्रचण्डसमेतका माओवादीका केन्द्रीय तहका नेता र जिल्ला नेतृत्वले समेत ठूलो स्वरमा भनेका थिए, हाम्रो गठबन्धन केवल स्थानीय तहका लागि होइन, आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा निर्वाचन तथा त्यसपछि सरकार सञ्चालनसम्मका लागि र देशलाई स्थिर सरकार दिई आर्थिक समृद्धि ल्याउनका लागि हो । माओवादीसँगका २—३ वटा संयुक्त सभामा उपस्थित भई उनीहरूका भाषण सुन्दा यो पंक्तिकारलाई लाग्थ्यो के माओवादी त्यति टाढासम्म जाला र ? पंक्तिकारको आफ्नो मन विश्वस्त हुन नसके पनि त्यतिवेला माओवादीका कार्यकर्ताले बजाएको ताली सुन्दा पंक्तिकार अचम्मित भएको थियो । तर, स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना नबित्दै वाम एकताका लागि भन्दै कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेको सुन्दा स्थानीय निर्वाचनमा जनता तथा माओवादी कार्यकर्तालाई दिएको वचन धोका सावित भएन र ? आफ्नै क्यान्टोनमेन्टका लडाकुका रकम हिनामिना गरेर लडाकुप्रति गरिएको धोका, एमालेसँग सत्ता साझेदारी हुँदाहुँदै अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर एमालेप्रति धोका, कांग्रेससँग गठबन्धन कायम छँदै प्रमुख प्रतिपक्षीसँग तालमेल गरी गठबन्धन गर्ने लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्कृतिप्रति धोका । १७ गते प्रचण्डले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ इतिहास रच्यौँ भनेको के यही धोकाको नयाँ इतिहास होइन र ?
राजनीतिमा गठबन्धन बन्नु या परिवर्तन हुनु आश्चर्यको विषय होइन । तर, गठबन्धन बन्दा वा तोडिँदा त्यो गठबन्धनको सामान्य मर्यादा वा नैतिकता भने कायम हुनैपर्छ ।
लोकतन्त्र र संविधानमाथि खतरा
१७ असोजको घोषणासभामा बाबुराम भट्टराईले तालमेलको उद्देश्य स्पष्ट पार्दै भने यो तालमेल संसद्मा दुईतिहाइ पु¥याउने र कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्था ल्याउने संविधान संशोधन गर्नका लागि हो । त्यसपछिका दुई नेता प्रचण्ड र ओलीबाट पनि त्यही कुरा दोहो¥याइयो । यो संविधान लागू भएको भर्खर मात्र दुई वर्ष भएको छ । अझैसम्म पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधान पूर्ण कार्यान्वयन हुनका लागि बन्नुपर्ने सयौँ कानुन अझै बनिसकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिक सभाको निर्वाचन हुन बाँकी नै छ । संविधान निर्माण गर्दा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपालगायत तत्कालीन मधेसवादीबाहेकका दलको साझा सहमतिमा संविधान निर्माण भएको हो । यो संविधान पूर्ण कार्यान्वयन भएपछि त्यसको परिणाम अर्थात् गुण दोष के हुन्छ, त्यसको परीक्षण हुनै बाँकी छ । संविधान कार्यान्वयन नहुँदै शासन व्यवस्था वा प्रणाली सम्बन्धित कुरामा विवाद सिर्जना गर्नु संवैधानिक अस्थिरता र कालान्तरका लागि राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्नु हो ।
नेपाल २००७ सालदेखि अहिलेसम्मको निरन्तरको प्रयास र संघर्षपछि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरेको मात्र होइन, २५० वर्षदेखिको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेको छ । अझै पनि राजतन्त्रका पुराना अवशेष र माओवादीजस्तो उग्र वामपन्थी, जसका कतिपय दस्ताबेज र निर्णय अझैसम्म पनि पुरातन साम्यवादमा पुग्ने अधिनायकवादी सोचका छन् । एमाले पाँचवटा आमनिर्वाचनमा सहभागी भई पटक–पटक सरकारमा रहँदा पनि उसका कतिपय नेता तथा कार्यकर्तामा तानाशाही हैकमवादी सोच र व्यवहार अझै कायमै देखिन्छ । यी पार्टीको संयुक्त तालमेल हुनु र त्यसको लक्ष्य संविधानको शासन प्रणालीको संशोधन हुनु निश्चय नै नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि खतरा हो । कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था सम्पूर्ण रूपमा ठीक हुँदैन, तर लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र वर्तमानमा अन्य राजनीतिक व्यवस्थाभन्दा सर्वोत्तम शासन प्रणाली हो । कुनै पनि शासन प्रणाली दोषरहित त हुनै सक्दैन । तर, संसदीय शासन प्रणाली नेपालमा यसकारण पनि उपयुक्त हो कि यसले कुनै पनि व्यक्तिलाई तानाशाह बन्न दिँदैन । राजतन्त्र फाल्नुपरेको शाह वंशसँग वैरभाव भएर होइन, नेपालमा राजतन्त्र रहँदासम्म जनतन्त्र सुरक्षित हुन नसकेको कारणले मात्र हो ।
त्यसैले, कमसेकम आगामी ३–४ आमनिर्वाचन अर्थात् १५–२० वर्षसम्म संसदीय व्यवस्थालाई विस्थापित गर्न खोज्नु लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संरचनाप्रति असहिष्णु हुनु हो । तसर्थ, यस्तो सर्वसत्तावादी सोचका साथ आएको तालमेलविरुद्ध सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक जनमत जागरुक र एकताबद्ध हुनु आजको सर्वोपरि खाँचो हो ।